Spa D'lax in Global Entrepreneurship Week (GEW) - 20 Nov 2014 - D Family Businesses
About D Family
Spa D'lax Menu
Spa D'lax Team
VA: Accountant (P005)
VA: Administrative Assistant (P004)
VA: Finance Assistant (P005)
VA: Spa Manager (P006)
D Chef's Special Butter Rice
Skincare also needed for men - Spa D'lax
Spa D'lax in Global Entrepreneurship Week (GEW) - 20 Nov 2014
D Spa Menu
D Media‎ > ‎
posted Nov 29, 2014, 1:02 AM by David Godwiller [ updated Dec 1, 2014, 2:54 AM ]
Spa D'lax in Global Entrepreneurship Week
D family businesses was at the Global Entrepreneurship Week (GEW) event held in New Ayar Hotelon Bo Aung Kyaw Road from6pm to 8 pm and showcased the services and sample products, which will be launched in the beginning of next year.
D family also accepted expression of interest to its products and services and for those who left their contact details was put in our priority list to be contacted once the new products arrived and would also receive special discounts.
The most exciting thing was the lucky draw for Spa treatments at Spa D’lax, which isapart of the D family businesses.
6 lucky draw were opened to the attendees and lucky draw certificates were awarded at the ceremony.
D Family businesses is very thankful to you for all the support and without you, D Family businesses will not be at where we are now.
၂၀ ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာလ၂၀၁၄ ညနေမှာ “D” မိသားစုက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင် သူများ ရက်သတ္တပတ် GlobalEntrepreneurship Week (GEW) ကျင်းပတဲ့ နယူးဧရာဟိုတယ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမှာ ညနေ ၆ နာရီ ကနေ ၈ နာရီ အထိရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ။ အဲ့ဒီပွဲလေးမှာကျတော်တို့ ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နောက်နှစ်ဦးပိုင်းမှာ အသစ် တင်သွင်းဖြန့်ချိမယ့်Spa ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကိုလဲ ပဏာမ မိတ်ဆက်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ဝယ်ယူလိုတဲ့သူတွေရဲ့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားတာကိုလည်း လက်ခံထားခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူဖို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေကိုတော့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရောက် လာတဲ့အခါမှာဦးစားပေးလျော့ဈေးစနစ် နဲ့ အကြောင်းကြားရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်Spa D Lax ပွဲတက်ရောက် အားပေးသူ တွေကို အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ကျတော်တို့ D မိသားစု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spa D Lax မှာ ကုထုံးတွေခံယူနိုင်ဖို့ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးပြီး ကံစမ်းမဲ ပေါက်သူ ၆ ယောက်ကို လက်မှတ်တွေ အသီးသီး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အားပေးကူညီမှုသာမရှိခဲ့ရင်ကျတော်တို့ အခုလို အချိန်တုိုတုိုအတွင်း အမျိုး သား Spa တစ်ခုအနေနဲ့ အောင်မြင်နေရာရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။
Building Capacity for Community by Community
www.facebook.com/thedplace | @thedplace | www.thedplace.com